ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းတွင်ရှိပါသည်။ 12.5'x50'၊Hall၊ကြွေခင်း၊ရေ၊မီး၊ 1650သိန်း...
Ad Number S-9683718
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟာသုခလမ်းတွင် ရှိပါသည်။ 13'x50'၊BR-2၊ကိုရီးယားပါကေး၊A/C၊ ကျွန်းဘီဒို-1၊...
Ad Number S-9683594
Ad Number S-9683450
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရေကျော်လမ်းမကြီးတွင်ရှိပါသည်။ 18'x70'၊BR-2၊ရေ၊မီး၊ပါကေး၊ 700သိန်း...
Ad Number S-9683375
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊မဟာသုခလမ်းတွင် ရှိပါသည်။ 13'x65'၊Hall၊Rcခင်း၊ရေ၊မီး၊ 6လွှာ 400သိန်း...
Ad Number S-9683332
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ 51လမ်းတွင်ရှိပါသည် ။ 12.5'x60'၊BR-1၊Hall၊Rcခင်း၊ရေ၊မီး 650သိန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ 51လမ်းတွင်ရှိပါသည် ။ 12.5'x60'၊BR-1၊Hal...
Ad Number S-9682791
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရေကျော်တွင်ရှိပါသည်။ 15'x60'၊BR-2၊A/C၊တာရာဇိုခင်း၊ နံရံကြွေပြားကပ်၊...
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရေကျော်တွင် ရှိပါသည်။ 15'x60'၊BR-2၊A/C၊...
Ad Number S-9682704
Ad Number S-9688898
ပုဇြန္​ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရ​ေက်ာ္လမ္းအနီး ​ေထာင့္တိုက္ တိုက္ခန္းအ​ေရာင္း
Ad Number S-9687950
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအနီးတွင် ရှိသည်။ 25'x45'၊BR-1၊ပါကေးခင်း၊ရေ၊မီး၊ 4လွှာ...
Ad Number S-9682627